स्क्वास - यो एउटा धेरै असामान्य आकार छ तरकारी छ। तिनीहरू बाहिरबाट थप जस्तो उडान saucers, बेल संग सजाया। वास्तवमा, यो तरकारी को स्क्वास र pumpkins को नजिकको नातेदार छ। Scallops सामान्यतया पकने पछि मा छैटौं दिन पहिले नै फसल छन्। यी तरकारी तिनीहरूले विघटन र थप जवान तयार भने, पर्याप्त कोमल छन् भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। स्क्वास नै धेरै सुन्दर छ। त्यसकारण, तिनीहरूले सामान्यतया सम्पूर्ण तयार छन्। अक्सर, को scallops को मज्जा देखि साफ छन्, र त्यसपछि भरी। तर, जहाँ तपाईं तरकारी shred गर्न चाहनुहुन्छ धेरै मूल व्यञ्जनहरु छ। उदाहरणका लागि, fritters स्क्वास। पकवान धेरै स्वादिष्ट बाहिर जान्छ।
क्लासिक स्क्वास fritters
यो नुस्खा मा पकाएको पकवान मात्र वयस्क छैन अपील गर्नेछ। प्यानकेकहरू पनि जस्तै छोराछोरीलाई पतन हुनेछ। आफ्नो तयारी लागि आवश्यक हुनेछ:
250 ग्राम स्क्वास।
दूध 100 milliliters।
खट्टा क्रीम को 50 ग्राम।
पीठो 25 ग्राम।
चिनी 25 ग्राम।
नुन र सोडा।
Fritters व्यञ्जनहरु स्क्वास एक अद्भुत पकवान - जो तपाईं यस लेखमा पाउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले धेरै चाँडै तयार पारे। सबै तरकारी तयार गर्न सुरु गर्न। स्क्वास धुन र कागज तौलिये संग ड्राई गर्नुपर्छ। कि पछि, बोक्रा हटाउन र grater, प्राथमिकताको सानो तिनीहरूलाई अंगीठी। परिणामस्वरूप ठूलो यसको कच्चा फारम, नुन र सोडा मा एक अन्डा थप्न आवश्यक छ। को मिश्रण सबै घटक र गर्मी मा 10 मिनेट को लागि आटा राखे।
खट्टा क्रीम र दूध अलग ह्विप गर्न। संरचना पनि प्रविष्ट गर्नुपर्छ मरिच र नुन, चिनी थप्नुहोस्। परिणामस्वरूप मिश्रण scallops जोडिएको हुनुपर्छ। आटा पनि तरल प्राप्त गर्नुभयो भने, यो एक सानो पीठो थप्न आवश्यक छ। कि पछि, आटा राम्रो तरिकाले मिश्रित हुनुपर्छ।
को स्क्वास fritters तयार गर्न, एक कराइ वनस्पति तेल मा गरम हुनु पर्छ। यहाँ तयार आटा बाहिर राख्नु आवश्यक छ। यो सबै भन्दा राम्रो चमचा बनाउने। भुट्नु प्यानकेकहरू दुवै पक्षले हुनुपर्छ। समाप्त पकवान जडीबुटी संग छिडकना गर्न सक्नुहुन्छ।
लसुन संग Fritters
लसुन संग स्क्वास fritters, एक थप दिलकश मन गर्नेहरूका लागि पूर्ण। आवश्यकता को तयारी को लागि:
धेरै मध्यम आकारको आलु।
पीठो तीन ठूलो चम्मच।
लसुन र ताजा जडीबुटी।
स्क्वास fritters कुनै पनि खाना पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ। युवा स्क्वास धोए गर्नुपर्छ, खुली। यो पनि मज्जा हटाउन लायक छ। एक भद्दा grater गर्न पीसने र नुन थप्न तयार तरकारी। र नुन संग scallops एक मात्र 10 मिनेट खडा छोड्नुहोस्।
आलु पनि सफा र धुन गर्न आवश्यक छ। Tubers चोट हुनुपर्छ, एक भद्दा grater तिनीहरूलाई rubbed। साग पतले गर्न आवश्यक छ। लसुन लौंग साफ र प्रेस मार्फत पास हुनुपर्छ।
10 मिनेट पछि, scallops हटाउन हुनुपर्छ। कटा तरकारी संग रस भोकमरी गर्नुपर्छ। कि पछि, तपाईं grated आलु, लसुन, अन्डा, नुन, मसला र जडीबुटी धेरै थप्न आवश्यक छ। यो सबै अलिकति मिलान, मिश्रण छ। परिणामस्वरूप मिश्रण एक सानो पीठो प्रविष्ट गर्नुपर्छ।
स्क्वास को Fritters लगभग तयार छन्। यो दुवै पक्षले कुटपिट र तलना एक चमचा राख्न मात्र रहनेछ। पकवान नरम र वायुमय बाहिर जान्छ। तर यसको मुख्य फाइदा - एक रहस्यमय स्वाद।
पनीर संग Patties: तस्बिर संग एक नुस्खा। पनीर संग Puff केक कसरी खाना पकाउनु
Appetizing आलु, multivarka मा stewed
रहस्यवादी फल्स - यो रहस्यमय शहर, जसमा "द पिशाच डायरीहरू" श्रृंखला को unfolding घटनाहरू
Gainer - यो के हो? स्टक टिप्स लाभ वाला: डाक्टर, मूल्य, साइड इफेक्ट को समीक्षा
Paranoid - यो हुनुहुन्छ? neuropsychiatric विकारहरु
, BPH - यो के हो? सौम्य prostatic hyperplasia